Trump, Q-Anon na 'ihicha akụkọ ifo dị omimi' (Robert Jensen, Janet Ossebaard): Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 25 March 2020	• 15 Comments
Agbanyeghị na Robert Jensen yiri ka ọ hapụrụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị aka nri n'oge na-adịbeghị anya, ọ ka bụ nnukwu onye nkwado Trump. A na-elele vidiyo ya ugbu a, dịka nke kpakpando ọhụrụ na mbara igwe; nwanyị nke kwenyere na UFOs na okirikiri ọkụkụ: Janet Ossebaard.
Nke ahụ dị mma n'onwe ya ikwere na UFO ma ọ bụ okirikiri nke mkpụrụ, mana dịka m siri chee, anyị na-amata atụmatụ nke ijikọ ndị na-achọ eziokwu na kolder. Agbanyeghị, ma Jensen na Ossebaard kwenyere na Donald Trump ga-azọpụta ụwa. Na Ossebaard ugbua ejikọtara nke ọma na akụkọ 'omimi' na 'Q Anon'. Robert Jensen na-ewere ya aghụghọ karịa, n'ihi na ọ nwere ike na-agba mbọ ka ọ ghara itinye aka na echiche ọgbụgba ahụ ogologo oge o kwere mee.
M ga-anwa ịkọwara gị ihe kpatara m ji kwenye na anyị na-emeso ụgbụ nchekwa ebe a. Anaghị m eme nke ahụ iji mee ka ndị mmadụ dị oji, mana m na-eme nke ahụ ma ọ dịkarịa ala, na-enye gị echiche dị iche n'okwu a, ka ị wee tinye ya na echiche gị.
Kedu ihe ụgbụ nchekwa ndị ahụ?
Netlọ nchekwa nchekwa bụ ndị, n'aha otu ike ọgbaghara anyị chere na anyị nwere ike ịmata n’azụ usoro mgbasa ozi, bụ ndị ama ama na mgbasa ozi ọzọ na-enwetakwa mmachi na mgbasa ozi ma ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi. Ha na-agbanye ọtụtụ mgbasa ozi ọzọ na netwọkụ ha. Mainstream ọwa na-akọ banyere ha (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha adịghị mma: gịnị na-enye gị nlebara anya na-eto). Na mgbakwunye, ọnụ ọgụgụ dị mkpa na-akwadosi ha ike Ndi IMB site na ndị na-ada maka 'ezi ụda dara ụda', na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Iji maa 911, dịka ọmụmaatụ, ịnwere onye dị otu a na US; onye chịkọbara nnukwu ndị na-akwado ya site na ịmepe ọhụụ ndị ọzọ nke ọgụgụ ọgụgụ 911 gọọmentị ahụ. Ace Baker a jisiri ike nweta nnukwu ndị na-eso ya n'etiti ndị kwenyere na 911 bụ ọrụ. O kpuchitere echiche nile dị iche iche wee kpọọ ndị o chere bụ akụkọ ọjọọ. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ọ bụ ihu nke 'ezi mmegharị', dịka a na-akpọ ya.
Ozugbo ọ nwere nnukwu ihe na-eso ya, o mere ihe onye ọ bụla na-atụghị anya ya. N'oge ihe nkiri redio, ọ malitere ịsị ndị nne na nna, nwunye ya na ụmụ gị ihe ọma ọ bụla, ị nụkwara ụda egbe, mgbe ahụ ọ gbachiri nkịtị na onye na-enye ya kwuru, sị: "Enwere m olileanya na nke a abụghị eziokwu." N'oge na-adịghị anya, otu Ace Baker ahụ gbanwere ndụ ọzọ. N'ụzọ otu a ọ mere ka ntụkwasị obi nke 'eziokwu na - emegharị' n'otu ụzọ. (gee ntị) lee iberibe)
Agbanyeghị, enwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ, dịka ndị nke akpọrọ aha a ma ama na 'eziokwu mmegharị' ka emesịrị kpughere dị ka onye ndu n'ime òtù 'ofmụ nke Chineke'; ịrọ òtù na-eme ka ụmụaka na ụmụntakịrị nwee mmekọahụ. Maka na Zen Gardner nwere ike jikọọ na ọtụtụ mmadụ na '' eziokwu na-emegharị ', ndị ahụ niile butere ọrịa.
Ọtụtụ ọrụ eji akwụ ụgwọ nchekwa bụ ọrụ iji buo ezi eziokwu ma ọ bụ eziokwu pụtara ìhè. N'ihi na a na-akwali ha ebe niile, ha na-enweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ. Anyị na-ahụ otu ihe ahụ na Robert Jensen na Janet Ossebaard. Ebumnuche dị ogologo bụ na dịka ụgbọ azụ azụ nwere ike ịdọrọ ọtụtụ mmadụ dị ka o kwere mee na ụgbụ nchekwa ha, wee mechaa mebie ụgbọ mmiri azụ azụ. Nke a na - eme ka ị nwee ike menye ndị ahụ dị oke egwu ma gbochie ha ka ọ dị ugbu a na - eso usoro mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Na-ehichacha omimi miri emi na Q Anon
Ma Robert Jensen na Janet Ossebaard nwere nnukwu atụmanya nke Donald Trump. Atụmatụ Q Anon sitere na onye tinyere ozi ezoro ezo na ntanetị, nke na-ekwu maka omimi miri emi Trump chọrọ iwepu na Donald Trump onye na-alụ ọgụ miri emi. E nwere asịrị na Q Anon bụ ụdị mmemme AI ma atụkwara m nhọrọ ahụ n'isiokwu gara aga.
IBM's Deep Blue supercomputer meriri al na 1996 nke onye n’egwuregwu ụwa Kasparov ya na chess na Google Alphabet's Quantum Computer na 2016 onye mmeri ụwa nke egwuregwu kachasị dị egwu. Gaa kụọ aka. Obu ihe doro anya na ndi ochichi jiri komputa di egwu na atumatu ha na usoro mgbasa ozi na nke ozo, tinyere data buru ibu nke ndi mmadu (nke ha na anakọta n'otu oge).
Mana ka anyị hapụ nke ahụ n’etiti. Na usoro, anyị nwere ike iche na gọọmentị maara na ndị mmegide na-enwe mgbe niile n'etiti ọha mmadụ. Yabụ ọ bụrụ na ha nwere ike wulite mmegide ahụ n'onwe ha wee jide oke igwe mmadụ, ha ga-eme nke ọma. Ajụjụ Anon nwere ike ịbụ akụkụ nke atụmatụ ụgbụ nchekwa ahụ.
Ihe atụ nke Q Anon natara ụnyaahụ. Ihe a niile dị ka ọ buru amụma, yabụ ọ na - enye echiche na Q na - eso Trump arụ ọrụ. Olee otu ọzọ ha ga-esi mata ihe ndị a nile? Naanị gụọ:
Site: Dr Russell McGregor
Mkpebi ikpe ụlọ zuru ụwa ọnụ ga-aga n’ihu ruo mgbe ha niile ga-agwụ na Eprel 10 (Fraịdee). Tupu nke ahụ, ụbọchị iri nke ọchịchịrị ga-amalite n'ụtụtụ nke Eprel 10, ụbọchị ndị ahụ ga-agwụkwa na Eprel 1.
Ozugbo tupu ọchịchịrị 'ọchịchịrị', POTUS ga-ezitere ndị Tweet ya na: Ndị America ibe m… Oké Ifufe na-adị anyị …… ”(“ Mymụnna m ndị America… Oké Ifufe abịala ...) ”Ọdịdị nke 'Eprel 1' ga na mbụ belata nchegbu banyere ọdịdị nke ọchịchịrị. Mgbe 'ọchịchịrị' ahụ bilitere, a ga-enwe mgbawa na ujo gbara gburugburu Coronavirus na ọnọdụ ahụike zuru ụwa ọnụ. A ga-ekwupụta ihe mberede ahụike ahụ na mbido Eprel 1 n'ọtụtụ obodo (na mba. Vert.).
Ọtụtụ mmadụ ga-etinyerịrị onwe ha n'okpuru njide ụlọ ma ọtụtụ emejupụtala nri, wdg.
N’Australia, ndị na-enweghị ọrụ na ndị lara ezumike nka ga-enweta $ 31 na Machị 750. Mba ndị ọzọ ga-emekwa ndokwa ndị a ka ụnwụ ghara ịnwụ. Storesfọdụ ụlọ ahịa ihe mberede ga-adị njikere ịre ngwaahịa dị oke mkpa, mana ọtụtụ ụlọ ahịa ga-emechi.
N'ime ụbọchị iri nke 'ọchịchịrị', ọ nweghị mgbasa ozi ọhaneze ma ọ bụ ịntanetị dị. A ga-enwe ọkụ eletrik, mana redio na TV agaghị adị. Agaghị ebipụta akwụkwọ akụkọ. Ndị agha nke mba ọ bụla ga-emechi ndị nkwusa a.
POTUS ga - enwe ụzọ dị adị iji gakwuru ndị mmadụ n'ụwa niile n'ime ụbọchị iri nke ọchịchịrị 'nke a ga - abụkwa na Mgbasa Mgbasa Ozi Mberede. Ndị agha niile n'ụwa niile ga-ezigara nke ahụ TV na ngwaọrụ dị na mba ha.
POTUS ga-anọ n'oge "ọchịchịrị", ma ọ bụ na mba ofesi, ma ọ bụ n'ụgbọ elu Airforce One. Ihe a na-akpọ ngọpụ maka iji Airforce One ga-abụ maka nchekwa yana / ma ọ bụ ihe ibute ọrịa. Usoro mgbasa ozi Mberede ga-agbasa site na Airforce One. Yabụ ga-enwe ngọngọ akụkọ dị mma, belụsọ POTUS.
A ga-ekesara ndị na-eme ihe ngosi emebela aka ọrụ site na TV na ngwaọrụ ndị ọzọ site na Mgbasa Mgbasa Ozi Mberede. Ihe dị n’ime ya ga-akọwa ihe ọjọ niile, mpụ na nkọwa nke ihe niile. Ọdịnaya a ga-abụ nke enyi na enyi nke ezinụlọ, ọ ga-akarịkwa ajụjụ.
POTUS ga-akọwa etu ndị agha United States siri rịọ ya ka ọ welie Deep State nakwa na ọ bụghị "onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị". Ọ ga akwado nkwenye Q a. Ndi a na-eme ihe ngosi a gha egosiputa nkwuputa edeputara n’aka ndi ndoro-ndoro ochichi obodo di omimi na ndi amara aha ha A ga - akọwa usoro nhazi ụwa. A ga-egosipụta ihe akaebe banyere mpụ. A ga-ekwupụta nkwupụta nke ụlọ ikpe ndị agha n'ihu ọha.
A ga-agbasa ihe ngosi ndị a, kwuo awa 8 kwa ụbọchị, n'ime ụbọchị iri zuru ezu. Ighaghari ga-ewere oge ezumike ka ndị na-arụ ọrụ na ndị nnapụta ghara ịhapụ ihe ọ bụla. Mgbasa ozi ga-aga n’ihu n’ime awa iri abụọ na anọ n’otu ụbọchị. Ezinụlọ agaghị enwe ihe ha ga-eme ma ha ga-elele ndị a. Vidio kachasị egwu nke nwere ihe akaebe agaghị adịrị onye ọ bụla, ndị chọrọ ikiri mgbe ụbọchị iri nke ọchịchịrị gbara na Internetntanetị.
A ga-enwe oke ujo, oke egwu na ọgba aghara. Ọrụ anyị dị ka ịhụ mba n'anya ga-abụ iji nye obi iru ala, nkwupụta, ọmịiko, na mmesi obi ike. Ọtụtụ ndị nna ochie na-atụbu ụjọ ikwu okwu ga-amaja.
Enweghị ike, mana enwere ike, na JFK Jr na ndị ọzọ ga - enye aka na ntinye aka na arụmọrụ a. Mgbe ụbọchị iri nke "ọchịchịrị" na njedebe nke Fraịdee, a ga-enwe ọgba aghara nke mmụọ.
N’ụbọchị Fraịdee, a ga-agwa ụmụ mmadụ na nje ahụ dịzi mma, mmadụ ga-apụkwa apụ. Ulo uka, ulo uka na alakụba ga-eju. A ga-enwe ọtụtụ nhụjuanya, mana a ga - enwerekwa enyemaka.
Onu pere mpe, ikekwe 5%, ga-enwe ike nchịkwa na ụbụrụ nke ịnabata eziokwu. Dị ka ọ dị na mbụ, ha ga-akpata ọgba aghara.
Ọnọdụ miri emi agaghị eweghara ihe niile ruo mgbe ebighi ebi. Ndị agha ga-enyocha ụlọ ọrụ TV na ndị na-ebi akwụkwọ akụkọ iji gbochie mbibi. Mgbe agbanyụrụ ahụ, a ga-ekpughere mgbasa ozi zuru ezu ma ọ gaghị enwe ike ịgbagha akụkọ ahụ.
Ndị dị omimi steeti na-agbabeghị onwe ha na mgbapụtakwaghị ha na Guantanamo Bay ga-atọgbọ na ngwụcha igbu onwe ha nke Eprel 11-12, 2020. A ga-ahapụ ndị mmadụ anaghị atụpụrụ onwe ha aka ka ha chebe onwe ha.
Ugbu a ihe ndị a dị n'elu dabara n'ụzọ mara mma ọzọ na nnọkọ mgbasa ozi mgbasa ozi abalị nke Doald Trump na-ekwupụta na ọ chọrọ ka ndị America nwee ike ịgagharị ọzọ wee gaa chọọchị n'oge Ista (lee. azụmahịainsider.com). Ya mere akụkọ Q Anon yiri ka ọ dabara n'ihe Trump kwuru, na-eme ka ọ bụrụkwu eziokwu. Onweghi onye choputara na oru a maara nke oma igwu ulo oru abuo a.
Kedu ihe bụ nsogbu na Robert Jensen
Will gaghị anụ ka m na-ekwu na enwere ihe adịghị mma na Robert Jensen dịka mmadụ. Echere m na ọ na-arụ ọrụ dị ka ebe nchekwa dị ka onye na-azụ ọzụzụ zụrụ azụ maara ọ ga - emeju ụgbụ nchekwa. Hiszọ ọgbara ọhụrụ abịabeghị ikwusa ozi banyere Q Anon. Agbanyeghị, ọ toro Donald Trump na vidiyo ikpeazụ ya maka Trump na-ekwu na ngwọta adịghị njọ karịa nsogbu ahụ.
Jensen na-ekwusi ike na mgbochi mkpọchi coronavirus dị oke egwu na ọtụtụ ga-ekwenye na ya. Ọ na-elekwasị anya na ọnụego ọnwụ na mmekọrịta ya na mmebi nke mba niile, gụnyere mmetụta akụ na ụba. Ọ na-enwetakwa nke a Bloomberg akwụkwọ, nke m jikọtara na ederede na mbụ. Ọ na-akọwa na 99% nke ndị nwụrụ na Italytali enwelarị ọnọdụ ndị ọzọ nke ha nwere ike ịnwụ.
Ugbu a, ị ga-asị:Ọ dị mma na? Kedu ihe adịghị njọ na nke ahụ? O zuru oke mgbe ahụ!?Akọwaara m ha n’elu ụgbụ nchekwa na-apụtachaghị ụgha. Ha nwedịrị ike igosi gị eziokwu zuru oke. Ebumnuche nke ụgbụ nchekwa bụ na ejikọtara gị na otu echiche ma ọ bụ mmadụ nwere otu echiche. Onye ahụ n'ọnọdụ a bụ Donald Trump.
Ọ bụrụ na ọ mechara bụrụ na Donald Trump anaghị azachasị omimi ahụ ma ọ bụrụ na ọ ga - emecha bụrụ na ụwa ga - akwa akwa na Donald Trump, dịka ọmụmaatụ, emehiela nnukwu ihe site na ịhapụ ịhapụ ndị America n'okporo ụzọ ọzọ n'oge izu ụka Ista (n'ihi na ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ọrịa ọgbụgba na coronavirus na-apụta ọzọ na mberede, ma bụrụkwa ndị na-eme ihe ike karịa), mgbe ahụ, ndị na-akwado Donald Trump na Jensen na-akụri n'otu ebe dara. Mgbe ahụ mmadụ nile ga-akpọ maka ka a tụọ ndị ahụ arụ ụka a jụrụ na-ahụ ihe dị ka nje corona ahụ dị ize ndụ.
Biko rịba ama: ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwekwara ike ịgbasa ihe ahụ nwere ike ịghasa ọzọ, mana ka ọ dị ugbu a ị gaghịzi enwere onwe gị iche echiche ike site na atụmatụ nchekwa yana ịfụ ụgbụ azụ Robert Jensen. N'ezie, 'echiche dị oke mkpa' bụ ọnọdụ akparamaagwa kachasị njọ n'oge ahụ.
Ihe dị njọ na Janet Ossebaard
Ọ ga-edo anya na abụghị m ịwakpo ndị mmadụ n'otu n'otu, dịka m na-eme kemgbe ihe karịrị afọ 7. Anaghị m achọ 'n'okpuru eriri'. Ana m adọ aka na ntị megide atụmatụ a ga-ahụ. Eziokwu ahụ bụ na enwere ndị nwere ike na-arụ ọrụ nzuzo na ọrụ ndị kwere ka ebuga ha dịka nchekwa ụgbụ nchekwa nchekwa maka akọ na uche nke anyị.
Maka Janet, o doro anya na ọ na-akpọsa echiche Q Anon na vidiyo ya. Ya mere ọ gbara gị ume n'ezie ka ị nọdụ ala chere chere ihe merenụ. Nzoputa Trump di nso. Edeela m akwụkwọ banyere nke ahụ dit en dit edemede.
Kedu ihe anyị ga - eme Ọfọn kwenye, kedu ihe ka dikwa nma?
Kpọtụrụ echiche ahụ bụ nsonaazụ a na-enweta mgbe ị nwetagoro mmechuihu ahụ mgbe ejidere gị na ebe nchekwa ma ụgbọ mmiri niile daa. Ọ bụ ya mere m ji na-eme ka ọ pụta ìhè na ọ bụ maka mmụọ gị. Nke ahụ bụkwa n’ụzọ ọzọ Robert Robert Jensen si tinye okwu ahụ na mgbasa ozi ọhụụ.
Ọ bụ ihe niile gbasara 'mmụọ gị' n'echiche nke 'ịdị adị gị'
N’akwụkwọ m a na m ekwu maka ịmara ihe n’ezie, a na m ekwu maka ihe nje niile metụtara nke chọrọ ime ka anyị jide ya. M bukwara amụma na ọrịa na-efe efe na nke a, dịka anyị na-ahụ ya ugbu a. Nke kachasị mkpa, na m kọwaara anyị na anyị agaghị enweta ọtụtụ ihe n’anụ ahụ. Really chere n’ezie na ọbụrụ na ndị ọrụ ugbo niile na-aga n'okporo ụzọ ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị niile dina ala, anyị nwere ike ịgbanwe ihe? Steeti egosiputala onwe ya na ọ nwere ike mechie akụ na ụba niile na-enweghị mmasị na ha.
Ihe anyị nwere ike na ihe anyị ga-eme karịrị atụmanya ndị na - echekwa ndị zọpụtara anyị; karịrị atụmanya na Q Anon na Trump ga-abịa napụta anyị. Ihe anyị nwere ike ime buru ibu karị! Ihe anyi puru ime bu ichota ikike okike gi. M kọwara nke ahụ n'akwụkwọ ahụ. Nwere ike ịzụta nke ahụ. I nwekwara ike gụọ ya n’efu na ọtụtụ ederede, mana maka ịnọ n ’ụlọ na n’ihi na inwere oge igha; nihi na inwere ike ichota ike gi; n'ihi na anyị nwere ike imeri ụjọ na maka anyị nwere ike karịa ihe anyị chere: ya mere enwere ike ị gụọ nchịkọta a:
Mara: A katọrọ m ugboro ole na ole n’oge na-adịbeghị anya maka ịchọrọ ịre akwụkwọ iji nweta ego. Edere akwụkwọ a na arịrịọ nke ndị na-agụ ya ka o wee kee ihe (n'efu ịgụ) ihe ndị si n'afọ ndị na-adịbeghị anya wee bụrụ ihe a ga-agụ n'otu ụbọchị.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: threadreaderapp.com, azụmahịainsider.com, bloomberg.com
Tags: ANON, omimi, agba, Janet, Jensen, hichaa, Akpụ afụ ọnụ, Q, Robert, trump, net nchekwa, nchekwa ụgbụ
O yighị ka Jensen ga - akwado Onye isi ala Brazil Jair Bolsonaro na mgbasa ozi ya n'abali a
Mara na nke a bụ akụkụ nke atụmatụ ụlọ mkpọrọ abụọ na usoro nchekwa nchekwa. Yabụ: ndị na - agọnarị coronavirus ma ọ bụ ndị na - ekwu na ihe ọ bụla ga - adị mma, a ga - ata ya ahụhụ n'oge na - adịghị mma n'ihi nlọghachi nke nje (ma ọ dịkarịa ala nke ga - egosi mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike site na onu ogugu). Mgbe ahụ, a na-akpali "ndị nkatọ" niile. Chee echiche banyere ogige agụmakwụkwọ, ahịrị mkpọrọ, wdg.
Trump na Bolsonaro bụ akụkụ nke egwuregwu ahụ. Imetachment Trump mgbe Ista gasịrị bụ nhọrọ ezi uche dị na ya ịtụ anya.
Naanị ilere anya mgbasa ozi Jensen na amụma m lere bụrụ eziokwu… (35:25 min.)
Dịka Trump, Bolsenaro kwupụtara nke ọma ugbu a dị ka "onye nzuzu na ajọ populist / ọjọọ nwoke ọjọọ. Ọ dị oke mfe ịghọta ịghọta ozugbo ị hụrụ otu o si arụ ọrụ.
Jensen ugbu a na-akpagharị akụkọ dịtụ iche n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị NL. Ndị nduhie eduhiela ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma duhie ha, n'ihi na ndị mgbasa ozi nwere ike karịrị akarị. (ma ọ bụrụ na imeghị ihe anyị kwuru na anyị nwekwara ike ịme wilders prime).
Yabụ na dị ka Jensen anyị (onye mụ anya) kwesịrị isi mee ka o doo ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anya na ha ga-agbanwe, mgbe ahụ ihe niile ga-adị mma.
I kwuru eziokwu na ha agwakọta eziokwu.
Eji m n’aka na ihe niile na-eme n’ụzọ nke mmụọ ugbu a. Ọtụtụ mmadụ na-atụ uche nke a n'ihi ihe ndọpụ uche niile. Ozugbo ị mechara n'enweghị ọrụ, anyị ka na-abanye na netflix, nrụgide na nje.
Mechie onwe gị, kwụpụ, gbanyụọ, nwepụ ma gaa n'ọkwa dị elu.
Ọ na - abụ mgbe ụfọdụ nkụda mmụọ kpamkpam. E wezụga Prince Charles nke England ugbu a nwekwara corona (echere m ya mma lol).
Onu ogugu ndi amara ama nwere corona kwesiri ibu otu onye n’ime 1. Mana ndị mmadụ na-ahụta nke a dị mma n'ihi na a na-atụba ha na mgbasa ozi na ọnụ ọgụgụ (echefula pasent !!!), dịka ọmụmaatụ, nke ọnụ ọgụgụ ndị o yiri ka ha nwere ụwa niile (dịka MSM si kwuo). Ihe a dịka 50 dị ka MSM si kwuo
98% nke ndị hụrụ ọnụ ọgụgụ a aghọtaghị ihe ọ pụtara ma ọlị. Ọ bụrụ na mmadụ 400.000 n'ụwa niile nwere corona nke a pụtara na ihe dị ka 1 n'ime mmadụ 17.000 n'ụwa nwere corona n'ezie!
Mụ na nwanne m nwoke na mmadụ ole na ole ndị ọzọ ji obi ụtọ na-amụ anya, emere m ntakịrị nyocha n'etiti ihe dị ka otu narị ndị mmadụ dị ntakịrị karịa ọgụgụ isi, na-ajụ ha n'etiti ihe ndị ọzọ:
Ngụkọta ọnụ ọgụgụ ọrịa corona dị n'ụwa niile dị puku anọ. Gini na onu ogugu uwa a bu nke a?
Azịza nke ọkara bụ (kwere na ọ bụ na ọ bụghị) na mmadụ 400.000 nọ n'etiti 1% na 10% nke ndị bi n'ụwa. Naanị mmadụ abụọ n'ime 2 zara ajụjụ ahụ.
Nke a pụtara na mgbe nkezi Dutchman (ma eleghị anya ndị sitere na mba ndị ọzọ) nụrụ ma ọ bụ hụ ọnụ ọgụgụ ọrịa corona 400.000 e dere n'ụwa niile, ọ na-eche na nke a bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ n'ụwa (Iro ugbua 1% ma ọ bụ 5% nke ndị bi n'ụwa nwere corona, lee ka ọ ga - esi dị ize ndụ).
Ahụkwara m nke a site na Jair Bolserano. Ihe na-atọ ọchị bụ na e kwere ka Putin kwalite echiche na-ezighi ezi na Russia: Putin na-ekwu na ọ dị oke ize ndụ na ndị Russia kwesịrị ịgbaso ntụziaka Big Nwanna kpọmkwem na mmadụ kwesịrị ị paya ibe ha ntị (Putin na-ekwu banyere otu ihe ahụ Rutte)
Gịnị kpatara ọnụ ọgụgụ ndị ụwa niile ji ehi ụra? O yiri ka ndị ọkaibe Luciferian hà kwadoro ha. N'ezie mmadụ kwesiri inwe ike iche ntakịrị na gbakọọ na ọ nweghị onye ụwa nwere corona? (ewezuga ndị a ma ama, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere corona).
Dika imara na i gha “ige ndi okacha mara” 😉
Agbanyeghị ... ọnụọgụ bụ ọnụọgụgụ n'ihi na mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agwa anyị ọnụọgụ ndị ahụ. Trumanshow? Maghị.
Ihe anyị maara bụ na ndị mmadụ na-ewere ọnọdụ ahụ na n'ọdịdị ị na-ahụ anya ka ị na-ahụ obere ọnụọgụ na mbido ruo mgbe oghe gbawara dịka akụ.
Ọ baghị uru ilekwasị ndị mmadụ anya na ọnụọgụ ma ọ bụ ọkwa ma ọ bụ akụkụ.
Ọ bara uru ilekwasị ndị mmadụ anya n'eziokwu ka anyị siri ghọta ya.
ihe m matara / mụta na “agụmakwụkwọ” PR mmekọrịta ọha na eze bụ na ọnụ ọgụgụ - ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ dịka akpọrọ ya nke ọma - bụ ihe kwesịrị ekwesị (iji) gbasaa. Mmekọrịta ọha na eze = igwu egwu / na-emegharị ndị na-ege ntị. Site na ọnụọgụgụ ị nwere ike “iwetulata” ọnọdụ niile / onodu niile / mmadụ na igwe okwu. Iha, ị na-ewepụ uru mmadụ. Ihe eji eme ihe bu uzo eji eme ka ogugu. Teknụzụ nke taa na-eji naanị ọnụọgụ abụọ - efu na nke iji mepụta eziokwu dị oke egwu. Ka imepụta ihe mkpuchi.
Obughi ihe kpatara anyi ji ekwu maka onu ogugu na ha na eme ka anyi maa anya. Y’oburu na ikufu uzo gi, i ghafu ihe, ya bu ihe ozo.
Ọ bụrụ na ịnweghị usoro / onodu, ị bụ site na ịkọwa ihe nwa bebi n'aka onye ọzọ.
Onu ogugu bu akara, uzo eji ekwurita okwu (ya na uche nke uche). Onu ogugu a nile bu ihe efu, ha na-ekwughi ihe obula, ma n’otu mgbe ha na-agwa ndi nile ihe ha. Ugbu a anyị erutela mgbe ọ bụ ọrụ anyị ịkọwapụta akụkọ ahụ (mkpụrụ osisi ndị ahụ).
Tugharia atugharia okwu Bekee na agwa gi karie ka inwere onye mbu chere. Tobonu bụ ọnya. Ọnụọgụ / ọnụọgụ bụ vector maka mmetuta obi (= mmetụta dị ala) na - enweghị (n’amaghị ama) na-achọpụta na ọ bụrụ n’anyị abụghị mmalite. A haziri usoro agụmakwụkwọ maka nke ahụ. A na-egosipụtara ọnụọgụ / ọnụọgụ / ọnụọgụ / ọnụọgụ / nọmba maka naanị otu ụdị, ụdị efu. O bu ya mere anyi ji acho “imuta ichota” iji wepu ihe omuma banyere uwa nile. Na agbanyeghị, nke ahụ bụ akụkọ ọzọ miri emi. Enwere olileanya na ị ga-ekwenye na nke a ma chebara ya echiche.
Iji maa atụ, iji mee ka mmadụ nwee mkparịta ụka hypnosis (ya mere ndị mmadụ ji ahọrọ ile TV ma ọ bụ ọwa YouTube), ọ kacha mma depụta ọnụ ọgụgụ ole na ole n'usoro. Nke a nwere mmetụta nke ịgbaghari usoro iche echiche gị. Ha na-anwa, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ịgbaso ọnụ ọgụgụ dị ukwuu ma ọ bụ ngụkọta, mana n'ihi na ụbụrụ gị nwere nsogbu “ijide”, ọkà okwu na-agabiga nsụhọ gị ma nwee ike ịhazi uche gị na-eche echiche site na ịtinye arịlịka.
Onye isi okwu (ma ọ bụ ọkachamara na NLP) Robert Jensen na-etinyekwa usoro a.
Na-ahụkwa ya nke ukwuu na ndị mmadụ dịka Jeroen Pauw. Have nwere otutu usoro na NLP na hypnosis mkparịta ụka, mana ọnụ ọgụgụ na ọnụọgụgụ na-eme nke ọma.
Ọ bụ ya mere ị ga - enwe amụma ihu igwe mgbe niile na njedebe nke akwụkwọ akụkọ. Then ga - ahụ ọnụọgụgụ, ị ga - atụfu ma laghachi azụ na maapụ. Will ga-ewepu onwe gị na maapụ (hypnotized).
Njedebe nke ife efe!
Oge ozo abia abia!
ya mere ọ bụrụ n’ hụ n’ụzọ ziri ezi, mgbe izu iri na otu gachara n’afọ 11, anyị nwere obere ọnwụ karịa akara ala?
"Kedu otu ị ga - esi nweta na m bụ onye mmegide a na - emegide Freeland? M bikwa n’ụlọ m ga-akwụ ụgwọ ya, m ga-egosi gị ego aka n’ụlọ akụ̀. ” Ọ dị mma Janet, gosi m akaụntụ nke akụ gị wee gosizie ego ụlọ akụ ọzọ.
"A si na m kpọburu m, aga m edozi ya"
Na ndepụta Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers) meghachi omume n'okpuru post ahụ na mkparị a na-emebu iji kpoo Vrijland (dịka ha na-eme na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ blọọgụ na mgbasa ozi niile na-elekọta mmadụ; nke ahụ bụ ọrụ ha).
N'ezie Janet agbanweela vidiyo ya n'ihi nkatọ m. Y’oburu na akporo m “kporo ya”, o gha buru oturu ihe ngosi 3 ajuju nke Q Anon na eme ohuru ma megharia akuko ya. Ee Janet, nri? Kolder n'ezie. A na-atụle ya nke ọma, kwadebere nke ọma na nkwalite Q Anon bidoro n'oge kwesịrị ekwesị.
Nọmba Oriaka Oriakụ Mrs Martin nyere ha maka onye chọrọ inye onyinye. Ff tsanani urara ??? NL33RABO03 ……… ..3 bụkwa nọmba nke ikpeazụ. Ọnụ ọgụgụ dị ole na ole pụọ na nzuzo, n'agbanyeghị na ọ tụpụrụ ya onwe ya. Kama kwuo ya.
Zero zaghachi na +/- 17.000 ndị na-ekiri ya, olee otu ọ ga - esi kwe omume na YT
ma ghaghi ikwu ọnụ ọgụgụ mara mma nke nkeji 6 3, ma ọ bụ 666
daalụ Janet, ahịhịa mmanụ Janet.
N'ezie na nkeji 4; 23 ọ na-ekwu, enwere m egwu ọnwụ maka otu afọ n'ihi okirikiri ọkụkụ, Janet Ossebaard chalet nke na-agwụ ike, n'ezie Janet, kpọọ Martin ugbu a
Hahaha… ooh ooh… nwoke nwoke… kedu ka o kwesịrị ịdị kwesịrị ịbụ ihe ọ bụla.
"Mmụọ ozi gị nọ n'ụwa" ọ na - ekwu banyere onwe ya ..
Ha kwesịrị ịkụziri ndị na-eme ihe nkiri ihe ọma ọfụma ka ha ghara igbochi igbochi ihe edeturu. Ọdịda nke kabal ..
Kedu ka i si bụrụ onye otu IMB? N'aka iji belata ahịrịokwu? Ha adịrịlarị na usoro nchekwa ego ọhụrụ nke ga-anọchi nke ochie? Inoffizieller Mitarbeiters (IMB'ers): ha na-eme ka hà were ya maka mmadụ, mana ha bụ ndị aghụghọ kachasị ukwuu; ndị otu NSB taa? IM nwere ndị IMBers ndị na-agwa gị ka ị nọrọ n'ime ụlọ ma na-echekwa usoro mgbasa ozi maka akụkọ steeti gọọmentị na ị nwere ndị IMBers na-agwa gị na Q Anon na Trump na-asacha cabal.
Oh ee na Lange IMB'er Frans nwekwara ike ime egwuregwu ahụ
" Mmelite mkpọchi Coronavirus covid-19: Mgbe iteta n'ụra wee mata na ọnye gị dị, gịnị ka ị ga - eme?
Onye isi obodo threattali na-eyi egwu iziga ọkụ na-ere ọkụ iji buso coronavirus ọgụ »
Nleta nile: 1.287.044
AnOpen op Corona Crisis: mgbe ọ bụ banyere ihe anyị kwesịrị ime ugbu a?
Mmiri op Corona Crisis: mgbe ọ bụ banyere ihe anyị kwesịrị ime ugbu a?
Onye nwe ya op Corona Crisis: mgbe ọ bụ banyere ihe anyị kwesịrị ime ugbu a?